PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-04 - Bashaye into ecokeme abemidlalo yeshashalazi
Bashaye into ecokeme abemidlalo yeshashalazi
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-04 - IZINDABA - THOKOZANI NDLOVU
LINYUKILE izinga lomqhudelwano wemidlalo yeshashalazi Isigcawu Theatre Festival eqale ngoLwesihlanu ezophela namuhla eK-Cap, KwaMashu.
Lo mqhudelwano osekungoka-14 ubakhona, kulo nyaka bekubhalise amaqembu angu-64 okuyisibalo esikhulu kuneminyaka edlule.
Umphathi weK-Cap, u-Edmund Mhlongo, uthe abe yisithupha amaqembu abebhalisile aqhamuka
Ongoye angafikanga kulo mqhudelwano ngenxa yezinkinga zakhona (Ongoye).
Ngaphandle kwalokho, uthe konke kuhambe kahle futhi amaqembu alo nyaka aliphakamisile izinga ngemidlalo aqhamuke nayo enemiyalezo ebalulekile.
“Okunye engikuqaphelile ukuthi babe baningi abesifazane abangenele Isigcawu kulo nyaka kanti phambilini bekuhlala kungabesilisa abaningi. Nezindaba ezakhayo abazixoxa ngemidlalo yeshashalazi ziningi kunezingakhi ebeziba semidlalweni yakudala,” kusho uMhlongo.
Uthe njengoba amaqembu eqale ukukhombisa ngemidlalo yawo ngoLwesihlanu, abenikwa imizuzu emihlanu kuphela ekhombisa ngomdlalo esteji ngenxa yobuningi bawo. Izolo kuqokwe angu-20 amaqembu abe kuma-semi finals kanti namuhla kuzobe kuqhudelana ayisikhombisa okuzophuma kuwona elizohamba nesicoco.
Njengoba kungusuku lokugcina lomqhudelwano namuhla, wonke amaqembu ayisikhombisa angenile azobe enikwa ithuba lokuthi awudlale wonke umdlalo wawo okalelwe imizuzu engu-20.
Umdlalo owinile kulo mqhudelwano uzothola uR15 000, indondo nesitifiketi, olala isibili uzothola uR5 000, indondo nesitifiketi kuthi olala isithathu uthole uR3 000, indondo nesitifiketi. Kuphinde kube nemithobanhliziyo kaR500 ohambisana nendondo nesitifiketi kumuntu ngamunye owine kwiPromising Actor, Promising Actress, Promising Writer nePromising Director.
Amajaji alo mqhudelwano kusuka ngoLwesihlanu kuze kube yinamuhla oMelusi
Yeni, Lungelo Madondo owayelingisa kuZalo, Siza Mthembu ofundisa iDrama eDUT, Kamogelo Molathloe oyiCasting Director kuMuvhango, Thuthukani Ziqubu oqhamuka e-AFDA noLihle Dhlomo ongumlingisi wemidlalo yeshashalazi namafilimu.
OMUNYE wemidlalo yeshashalazi wabasafufusa obuyingxenye yeSigcawu Theatre Festival ephela namuhla eK-Cap Isithombe: SITHUNYELWE